RIG fandavahana atsivalana XZ420E
XZ450Plus rig ary atsofohy rig
Rig fandavahana rotary XR360
Rig fandavahana tsara XSL7 / 360
Ny boribory boribory boribory boribory boribory XZ420E dia manana savaivony reflam-be indrindra 900mm, hery manosika faran'izay 500kN, tselatra 18500N · m, ary lanja milanja 11.2t.
XZ420E HDD dia ireo vokatra vaovao izay mametraka ny haitao mandroso, ny traikefan'ny mpampiasa, ny fahombiazan'ny fananganana iray manontolo, ary mifantoka bebe kokoa amin'ny fitakiana fananganana, fahazarana miasa, fitsitsiana angovo amin'ny rafitra, ary azo ampiasaina betsaka amin'ny fananganana fantsona an-tanàn-dehibe toy ny herinaratra elektrika, fifandraisana, fahitalavitra tariby sns.
Famaritana ny vokatra Zava-nisongadina tamin'ny vokatra
1.Ny rafitra mpanamory fiaramanidina fanaraha-maso tokana dia manome fahombiazana amin'ny fampandehanana sy fampivoarana miovaova ho an'ny masinina iray manontolo. Ny singa hydraulic marika kilasy voalohany dia voafantina mba hiantohana ny fiasa azo antoka amin'ny rafitra hydraulic machine.
2.Rack sy pinion mihetsiketsika, hiantohana ny fitoniana amin'ny kalesy sy ny fahamendrehan'ny fiara mandeha. Fiaramanidina mitsingevana, XCMG manana patanty manana kalesy mivezivezy, teknolojia miadidy mitsingevana dia afaka miaro be ny kofehy fantsom-pandrefesana, ny fitomboan'ny 30% ny faran'ny serivisy.
3. Rafitra mihetsiketsika haingam-pandeha, motera piston hahatratra ny hafainganam-pandehan'ny fivezivezena ambony sy ambany, mampitombo ny fahafaha-miaina ny toe-piainan'ny masinina, mampiroborobo ny fahombiazan'ny fananganana.
4.Ny masinina manontolo dia mampiasa teknolojia fiarovana toy ny mandeha an-tariby mifehy tariby, ny seza fipetrahana, ny lozisialy mifehy, ny fiarovana ny fikororohana herinaratra ary ny fotoana fohy Plus 20%, mahafeno ny fepetra takiana amin'ny CE.
5.Sliding, rotating system output maro, rafitra maotera mahazatra modular sy modely fanaraha-maso elektronika, fitsitsiana angovo rafitra, fahombiazan'ny fananganana avo, fitomboan'ny 15%.
6.Tohano ny filan'ny mpanjifa isan-karazany, ny masinina dia azo ampitomboina miaraka amin'ny cab, air conditioner, fanombohana mangatsiaka, antifreeze fotaka, tsorakazo mandeha ho azy, fiarovana ny herinaratra miaro solika mandeha ho azy sns, mampihena ny herin'ny asa, manatsara ny fahombiazan'ny fananganana.
Endri-javatra fampidirana XZ420E HDD
Pinion sy kapila
Max hery fanosehana pull kN）
Hafainganana fitarihana Max （m / min）
Fiara maotera efatra
Torolàlana （N · m）
Hafainganam-pandeha Max （r / min）
Diamère × Halava （mm × mm）
Max tahan'ny onja （L / min）
Max pression （MPa）
Max zoro fironana
Max savaivony backreamer
Tsy voatery ampiasaina
Engine China Ⅲ amin'ny dingana III any Shina
400L L paompy fotaka paompy 400L
450L L paompy fotaka paompy fotaka 450L
Antifreeze fotaka Antifreeze fotaka
Pipeloader semi-automatique an'ny fitaovana fikirakirana semi-mandeha ho azy
Fametrahana mandeha ho azy pipeloader feno-mandeha ho azy
Fiara karetsaka Trano mora tranolay tsotra
Cab (rivotra mangatsiaka sy mafana) Cab sy aircon
Mandehandeha amin'ny fifehezana tsipika mahitsy
Mandehandeha voafehy mifehy tariby,
Fisondrotana eo noho eo
Fotoana fohy Plus 20% hery
Fanairana fanairana herinaratra
Fiarovana ny hatairana elektrika
Asio menaka kofehy mandeha ho azy Daub menaka kofehy mandeha ho azy
Varingarin'ny solika hydraulic
Mpandeha haingam-pandeha mandeha
Antontan-taratasy miaraka aminy
Manomboka ny masinina XZ420E HDD rehefa miaraka amin'ny lisitra fonosana, ampidiro ireto antontan-taratasy teknika manaraka ireto:
Fanamarihana momba ny vokatra / Manualn'ny vokatra / Famaritana ny motera / fiantohana motera / torolàlana momba ny paompy fotaka
Lisitry ny fonosana (ao anatin'izany ny fizaranao ny faritra sy ny fanatobiana entana, ny lisitry ny fitaovam-pitaterana, ny lisitry ny fandefasana entana)
Miaraka amin'ny fandrosoan'ny teknolojia tsy tapaka, tsy afaka mampandre anao ny fiovan'ny vokatra izahay. Ireo masontsivana sy toetra mampiavaka ny firafitra voalaza etsy ambony dia iharan'ny vokatra tena izy, azafady azafady!
Teo aloha: XZ400 Rig ary atsofohy amin'ny familiana
Manaraka: XZ450Plus rig ary atsofohy rig
Fitaovana fandavahana Hdd
milina fandavahana hdd
Masinina Hdd Rig
Fitaovana fandavahana torolàlana marindrano
Milina Borewell Hydraulika
Milina mankaleo tsara
Fandrefesana fandefasana torolàlana XZ680A
XZ400 Rig ary atsofohy amin'ny familiana
RZ fandavahana boribory làlana XZ6600
XZ1000A familiana fandavahana torolàlana
Rig fandavahana torolàlana azo alefa XZ1350
milina fandavahana hdd, Rig ary atsofohy amin'ny familiana, milina fandavahana lavaka, hdd rig,